देशमा सरकार र सत्ता परिवर्तन भए तर किन परिवर्तन भएन यो ‘आरनदार’को जीवनस्तर ? - देशमा सरकार र सत्ता परिवर्तन भए तर किन परिवर्तन भएन यो ‘आरनदार’को जीवनस्तर ?
नेपालबहस संवाददाता २०७४, १० फाल्गुन 75 Views
१० फागुन, काठमाडौं । साबिकको धबाङ–१, रोल्पाका ५० वर्षीय साकुरे सुनार वर्षौंदेखि आरनमा काम गरिआएका छन् । खुकुरी बेचेर दैनिकी चलाउँदै आएका सुनार केही दिनदेखि बिरामी परेका छन् ।
टाउको दुःख्ने, छाती दुःख्ने, ज्वरो आउने, श्वास बढ्ने समस्या बढेपछि उनलाई पेशा सम्हाल्नै हम्मे हम्मे परेको छ । गाउँकै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्दा उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छैन । चिकित्सकले क्षयरोग लागेको हुनसक्ने भनेपछि उनी थप चिन्तित बनेका छन् ।
यसरी बिरामी परेका सुनारको स्वास्थ्यमा समस्या बढेसँगै पेशा नै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ताले उनलाई पिरोल्न थालेको छ । “कोइला पोल्न जानुपर्छ, फलाम चाहिन्छ । खुकरी बनाउने पेशा सजिलो छैन । तर रोजीरोटीका लागि यही पेशा नगरी सुख छैन,” उनले भने ।
सुनारका क्रमशः २२ वर्ष, १९ वर्ष, १६ वर्ष, ११, वर्ष, ९ वर्ष र ८ वर्षका गरी ६ सन्तान छन् जसमध्ये माथिका दुई छोरी र एक छोराले १४÷१५ वर्षकै उमेरमा प्रेम विवाह गरेर हिँडिसकेका छन् भने दुई छोरी १५÷१६ वर्षकै उमेरमा आमा बनिसकेका छन् ।
आफूले सानैमा आमाबाबुको मृत्यु भएका कारण पढ्न नपाए पनि छोराछोरीलाई ऋण काडेरै भए पनि पढाउने उनको तीव्र चाहना थियो । तर छोराछोरी बिहे गर्दै जाँदै गर्नुले उनको सपना साकार हुन सकिरहेको छैन । जिल्लामा बालविवाह अन्त्यका लागि अभियान चले पनि यस्ले कुनै असर नपारेको उनको गुनासो छ । हाल घरमा भएका सन्तानले पनि यसैगरी पढाइ छोडेर बिहे गर्लान् कि भन्ने चिन्ताले उनलाई दिनरात पिरोल्न थालेको छ । “यिनै छोराछोरी पढाएर आँखा देखाउन पाए बूढेसकालमा सहारा बन्लान् भन्ने लागेको तर फटाफट पोइल हिँडेर सकिन लागे,” उनले दिक्क मान्दै भने ।
जेठो छोरो पनि १६ वर्षकै उमेरमा विवाह गरेर इँट्टाभट्टा छिरेपछि उनमा थप निराशा बढ्न थालेको छ । घरमा भएका छोराछोरी साना छन् । पखेटा उम्रेका चरीले गुँड छोडेर हिँडेपछि उनलाई आफ्नोभन्दा सन्तानको भविष्यको चिन्ताले सताउने गर्छ । यता घरखर्च, उता उपचार खर्च जुटाउनुपर्ने भएपछि बिरामी परेका साकुरेले बुधबार ९ वर्षीय छोरा विशाल सुनारलाई डोकोभरि खुकुरी बोकाएर सदरमुकाम आइपुगेका थिए । विशाल हाल गाउँकै विद्यालयमा कक्षा ३ मा अध्ययन गर्छन् । ६ जना सन्तानमध्ये उनी बीचका हुन् । साकुरे अशक्त भएपछि ९ वर्षीय विशाल हाल उनका बुबाको सहारा बनेका छन् ।
किताब कापीको झोला थमाउन मुस्किल पर्ने विशालको सानो पिठ्यूँमा १५ वटा खुकुरीले भरिएको डोको थियो । चरचरी फुटेका हात, उस्तै धुलाम्य खुट्टा, पैतालामा च्यातिएको चप्पलको भरमा उनी बाबुको साथमा सदरमुकाम आइपुगेका हुन् ।
“घरमा नून–तेल सकिएको छ । आफूलाई उपचार गर्ने पैसा पनि छैन, त्यसैले छोरालाई खुकुरी बोकाएर यता आएको हुँ,” उनले भने । आफूले नसकेको बेला ग्राहकले रु पाँच हजारको खुकुरी तीन हजारमा र तीन हजारको खुकुरी रु एक हजार ५०० देखि दुई हजारमा उठाएपछि यो महिना धान्न गाह्रो हुने भन्दै उनले दुखेसो पोखे । “गरिबी तथा बेरोजगारीका कारण जिल्लामा विशाल जस्तै धेरै बालबालिका रोजीरोटीका लागि ठूलो श्रम गर्न बाध्य छन् । बालअधिकारका चर्का नारा बोक्नेको यसतर्फ समयमै ध्यान जान जरुरी देखिन्छ,” रोल्पा नगरपालिकाकी सरस्वती रिजालले भनिन्।
यस्तै, बालविवाह न्यूनीकरणका लागि अभियान थाल्नेहरुले सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा अधिकारकर्मीको जोड छ । गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा तथा चेतना अभावका कारण बढ्दै गएको बालविवाह न्यूनीकरणका लागि व्यावहारिक रुपमा सबै सक्रिय बन्नुपर्ने स्थानीयवासी अनन्ता आचार्यको सुझाव छ ।
सरकार गठनसँगै शेयर बजार ३६ अंकको वृद्धि
स्मार्ट लालपुर्जा बाँड्ने तयारी गर्दै सरकार
प्रदेश मन्त्रालयमा ३५ देखि ९० कर्मचारी रहने
यस्तो छ, ६४ मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुको जिम्मेवारी, माओवादी भने अझै सरकार नछोड्ने मनस्थितीमा
सर्वोच्चले दियो सरकारलाई कारण देखाउ आदेश